Home Wararka Maraykanka oo siyaasiyiin caan ah ku kordhiyay liisk xayiraadaha kuwaas oo carqalada...
Maraykanka oo siyaasiyiin caan ah ku kordhiyay liisk xayiraadaha kuwaas oo carqalada ku ah nabadda Soomaaliya
Dowlada Mareykanka ayaa siyaasiyiin caan ah ku kordhiday liisk xayiraadaha Visaha kuwaas oo lagu soo eedeeyay in ay carqalad ku yihiin nabadda Soomaaliya iyo geedi socodka doorashooyinka dalka. Liiska oo aan banaanka la keenin wali ayaa la filayaa in la shaaciyo marka doorashada xildhibanaada soo dhamaato.
Ka dib markii dowladda Soomaaliya iyo qaar kamid ah maamul goboleedyada ay ku guuldareysateen dhameystirka doorashada aqalka hoose oo ku ekayd 15-ka Maarso, Mareykanka ayMaraykanka oo siyaasiyiin caan ah ku kordhiyay liisk xayiraadaha kuwaas oo carqalada ku ah nabadda Soomaaliyaaa sheegay inuu kordhiyay tirada madaxda Soomaalida ah ee lagu soo rogay xayiraaddaha fiisaha.
Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay, iyadoo raacaysa siyaasad ay ku dhawaaqay 8-dii Febraayo, oo qeyb ka ah sharciga socdaalka iyo jinsiyadda, inay xaddidayso bixinta fiisaha kuwa la rumeysan yahay inay carqaladeynayaan hannaanka dimoqraadiyadda ee Soomaaliya.
“Mareykanka wuxuu si weyn u taageerayaa dadka Soomaaliyeed iyo sida ay uga go’an tahay dimuqraadiyadda. Waxaan kordhinayaa tirada shaqsiyaadka Soomaaliyeed ee lagu hayo xannibaadaha fiisaha, kuwaas oo ku howlan wiiqitaanka hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya,” ayuu yiri xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka antony Blinken
Inkastoo dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay horumaro laga sameeyay doorashada aqalka hoose lana doortay tiradii ugu badnayd ee barlamaanka, haddana dowladda Maraykanku waxay sheegtay inay weli jiraan warbixino lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan khaladaad ka dhacay habraaca doorashada, Saxafiyiinta iyo xubnaha mucaaradka ah oo lagu sameeyay cagajugleyn, iyo xarig.
Ugu dambayn wuxuu sheegay Maraykanku inuu wadi doono siyaasadda isla xisaabtanka, tasoo uu sheegay in lagu taageerayo soo gabagabeynta degdegga ah ee hannaanka doorashada Soomaaliya si lagu kalsoonaan karo oo hufan.
Maraykanka ayaa ka gaabsaday inuu shaaciyo magacyada shakhsiyaadka uu kusoo rogay ama hadda kusoo rogayo cunqabataynta dhinaca fiisaha dalka ku galka.
Previous articleCiidamada Puntland oo howlgalo ciidank ka fuliyay buuraha Galgala
Next articleDani oo ku adkeystay inuu doorashada kuraasta hartay uu qabto maalin Jimco ah
Mas’uul caawa lagu dilay Jowhar (Faah-faahin)